တယ်လီနောမြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာချုပ်အဖြစ် Sharad Mehrotra ကို ခန့်အပ် | Telenor Myanmar
တယ်လီနောမြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာချုပ်အဖြစ် Sharad Mehrotra ကို ခန့်အပ်
19 June, 2018 - Yangon
တယ်လီနောလုပ်ငန်းစုသည် Sharad Mehrotra ကို တယ်လီနော မြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (Chief Executive Officer) အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီး ယင်းခန့်အပ်မှုသည် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Sharad သည် တယ်လီနော လုပ်ငန်းစု၊ Emerging Asia Cluster ရှိ လုပ်ငန်းစု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူမည့် Lars Erik Tellmann ထံမှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရာထူးကို လွှဲပြောင်း ရယူ မည်ဖြစ်သည်။
Sharad Mehrotra သည် တယ်လီနော အိန္ဒိယ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ် နောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ သူသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က စတင်ကာ တယ်လီနောတွင် ဦးဆောင်ရာထူးအမျိုးမျိုး ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။
“Sharad ကို တယ်လီနော မြန်မာကနေ ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ စျေးကွက်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလို ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဆုံး စီမံခန့်ခွဲသူအဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ စျေးကွက်နဲ့ ဓလေ့ထုံးထမ်းတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ထားသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် တယ်လီနော အိန္ဒိယကို စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ လက်တလော အတွေ့အကြုံတွေအရ ပါဆိုရင် ယှဉ်ပြိုင်မှု လျှင်လျှင်မြန်မြန် များပြားလာတဲ့ အခုလို စျေးကွက်အခြေအနေမျိုးမှာ သူ့အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲသွားနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှု ရှိပါတယ်” ဟု တယ်လီနော မြန်မာ အုပ်ချူပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌနှင့် Emerging Asia ၏ အကြီးအကဲဖြစ်သူ Petter-B. Furberg က ပြောကြားသည်။
“အခုလိုအခွင့်အရေးထပ်မံရရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမိပြီး မြန်မာနိုင်ငံက တယ်လီနောရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပြန်လည်လက်တွဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာမို့ စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တယ်လီနောအနေနဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး သုံးရလည်း လွယ်ကူတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးအပ်နေနိုင်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက အထင်ရှား လူကြိုက်အများဆုံး အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင် ရပ်တည်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ စျေးကွက်ထဲ စတင်ချိန်ကာလတွေတုန်းက အခုလို အောင်မြင်မှုတွေ အခြေတည်အောင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိ ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှုရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြသူတွေအားလုံး အပြည့်အဝ ရရှိ နိုင်စေဖို့ရာ တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု တွေကို ကုမ္ပဏီကနေ ဆက်လက်ဖော်ဆောင် နေတာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့အနေနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ်တစ်ဦးနေရာကနေ ဒီလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်းရှေ့ဆက်တိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု Sharad Mehrotra က ပြောကြားသည်။
Sharad သည် တယ်လီနော လုပ်ငန်းစု၊ Emerging Asia အကြီးအကဲ၏ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် လုပ်ငန်းစု စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ် ပြောင်းလဲတာဝန်ယူမည့် Lars Erik Tellmann ထံမှ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်ရာထူးကို လွှဲပြောင်း ရယူ မည်ဖြစ်သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်းမှာ ဘဏ္ဍာရေး အရာချုပ်နဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တာဝန်တွေ ထမ်းဆောင်ပြီး တယ်လီနော မြန်မာကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Lars Erik ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာရှမှာ အကောင်းဆုံးကွန်ရက်တွေထဲက တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားနိုင်တဲ့ တယ်လီနောမြန်မာဟာ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်တည်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Emerging Asia အစုအဖွဲ့မှာ လုပ်ငန်း တိုးတက်စေဖို့နဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို ဖော်ဆောင်ဖို့ သူ့အနေနဲ့ ရာထူးအသစ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတူတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါ” ဟု Petter-B. Furberg က ပြောကြားသည်။
ယခု ထုတ်ပြန်ထားသည့် ခန့်အပ်မှုများသည် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင် အသက်ဝင် မည်ဖြစ်သည်။